ဘိုးအင်း 747-400 DOWNLOAD, Mega အထုပ် Vol.6 FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 121 ကို MB
downloads ရယူရန္ 40 247
Author: စီမံကိန်း Opensky, Emil Serafino Jr က Devyn Silverstein, Alejandro Lucena, လူးဝစ် Quintero
ဘိုးအင်း 747-400 Mega ပက်ကေ့ Volume ကို 6
ဤတွင်ဘိုးအင်း 747 အလွန်အမင်းအသေးစိတ် 8 ကြီးမြတ် packages များခွဲခြားအားလုံး၎င်း၏ပုံစံများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ volume2ပါရှိသည်3 repaints အရည်အသွေးမြင့်မားသူတို့ရဲ့စံပြအညီပိုင်းခွဲ။ စစ်မှန်သောနှင့်ဓလေ့ထုံးစံနှင့်အတူထည့်သွင်းအင်ဂျင်၏အသီးအသီးအမျိုးအစားများအတွက်အသံ။ တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသော add-on တစ်ခု 747 ၏ပရိသတ်များသည်။
Volume ကို No.6 (ထို LCF နှင့် yal-747 မှလွဲ. ) အခွားဘိုးအင်း 400-1 မျိုးကွဲအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် Volume ကို5တစ်ခု extension တခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်6နှင့်ပိုမိုနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလေကြောင်းလိုင်း variants ။ ထည့်သွင်းအဆိုပါမျိုးကွဲအောက်ပါနေကြပါတယ်: -400BCF, -400ER, -400ERF, -400F, -400Combi, -400D ။
General Electric, Pratt & Whitney နှင့် Rolls-Royce အင်ဂျင် (ရွေးချယ်သောလေယာဉ်ပေါ် မူတည်. ) ဖြင့်တပ်ဆင်စီမံကိန်း Opensky အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများ၏ 11 ဘိုးအင်း 747-400 မော်ဒယ်များပါဝင်သည်။
ကို default 747-400 ရဲ့ Virtual cockpit ကိုအသုံးပြုသည် ၎င်း၏လွယ်ကူတဲ့နားလည်မှုနှင့်သရုပ်မှန်ကြောင့်ဒီအထုပ်ထဲမှာ။
Cathay ပစိဖိတ်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် / ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် / Martinair / UPS
AirBridgeCargo လေကြောင်းလိုင်း / ပြင်သစ်လေကြောင်းကုန်တင် / တရုတ်ကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်း / KLM Cargo
Cargolux / Cathay ပစိဖိတ်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် / Dreamliner livery / စော်ဘွား / Guggenheim လေကြောင်းအပေါင်းအဖေါ်များ
ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် / နိပွန် Cargo လေကြောင်းလိုင်း (3 liveries) / TNT လေကြောင်းလိုင်း / UPS
Air လေကြောင်းလိုင်းနမီးဘီးယား / EVA Air လေကြောင်းလိုင်း
ပိုကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံရှိခြင်းများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ် 23 အပိုအမြင်ချင်း။
မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုယူနစ် (Pushback ကားများ, ဖြည့်တင်းဝန်ဆောင်မှု, Cargo Loader, etc featuring) ။
အကို Virtual cockpit အလင်းအိမ်အတွက် Fixed bug တွေညမှာပျံသန်းသောအခါ။
အ aircraft.cfg အတွက်ကိစ္စများလေယာဉ်၏ပိုကောင်းတဲ့နှင့်လက်တွေ့ကျကျစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်တညျ့ခဲ့ကြသည်။
အ 747 မှ install လုပ် GPWS system ကို Alejandro Lucena အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Virtual cockpit edited ။
အတူသာလျှင်သဟဇာတ FSX-SP2 (သို့မဟုတ်ညီမျှ) / Acceleration နှင့် P3D v1 & v2 +